मैले भेट्दाकी कन्चन, मैले सबैलाई भन्नै पर्छ कन्चन दिदी दिक्षाकोमा जानुभन्दा पहिले फोहोरको डंगुरमा नभएर सफा सडकको पेटीमा थिइन् | Rochak Khabar
मैले भेट्दाकी कन्चन, मैले सबैलाई भन्नै पर्छ कन्चन दिदी दिक्षाकोमा जानुभन्दा पहिले फोहोरको डंगुरमा नभएर सफा सडकको पेटीमा थिइन्
— updated on 1 month ago
जिबन को गोरेटो रोचक बिशेष Rochak Khabar
साउनको महिना । सिमसिमे पानी । साउन ४ गते । (अंग्रेजी महिना जुलाई १९ , २०१६ ) विहानैको मौसम चिसो–चिसो । मर्निङ वाकका लागि विहानै सवा पाँचवजे पशुपति पगिसकेकी थिए म । त्यहाँ झण्डै आधाघण्टा व्याटमिन्टन खेलेर घर फर्कदै थिए । सिमसिम पानी परिरहेको थियो । छाता थियो साथमा । सानो गौचरणको ओरालोमा रहेको सानौ गौचरण आयल स्टोरको अपोजिटमा रहेको सानो चिया पसल ।
भूकम्पमा घर भत्किएपछि त्यहाँ डेरा गरेर बसेकी लगभग ५५–६० वर्षकी आमैको चिया पसल छ । त्यहाँ विहान–विहान खुब मिठो र सफा तरिकाले ती आमैको हातबाट बनेको आलु र प्याजका पकौडा खान पाइन्छ । सातबजेसम्म पाकिसकेको हुन्थ्यो पकौडा ।म त्यहि बाटोमा आउँदै थिए । सीमसीमे पानीले भिजेकी एक अर्धबैसे युवती हाफ टिर्शट र कालो पाइन्टमा मन्द मुस्कान सहित बसेकी थिइन् । लाग्थ्यो मलाई देखेर कोही सहयोगी आयो या यसले चिया खुवाउँछ यातफेरि उसले चुरोट खुवाउँछ भन्ने जस्ता भाव मुहारमा देखिन्थ्यो । (हे.तस्बिर)￼म त्यो बाटो धेरैपटक हिडेकी थिए । तर ती महिलालाई पहिलो पटक त्यस्तो अवस्थामा देखेकी थिए । नजदिकमा पुग्दा दिदीको शरिरबाट पिसाबको गन्ध र मुखबाट रक्सिको वासना आएको थियो । लाग्यो खल्तिमा भएको पैसा निकालेर दिउँ, होइन, पैसा दियो भने दिदीले रक्सि खालिन् । होइन, बिहानी पानी परेको चिसो–चिसो छ चिया नै खुवाउँछु । त्यहि आमैको पसलमा पुगेर एक कप चिया मागे । अनि पकौडा पनि मागे । ती दिदीलाई भित्रै राखेर चिया खुवाउँछु भनेर भित्र लगेकी थिए । तर, ती आमै र त्यहाँ वरपरका स्थानीयहरु ती दिदीको व्वयहारले आजित भएका रहेछन् । आमैले भनिन् “मैया यसलाई नल्याउनुस यता, जहाँ खायो त्यहि पिसाब गरेर हिड्छ यसले । म त बस्न दिन्न भित्र ।”सोचे मनमा फोहोर र बाहिर सफा खोज्ने समाज यस्तै हो । यहाँ दुःखी र गरिवले कस्को घरमा बास पाउछ । अनि ती दिदीलाई बन्द रहेको सटरको पेटीमा राखे । दिदीले चिया र पकौडा खाइन् ।पसलकी आमैसँग कापीको पाना र कलम मागेर अनि सुरु गरे । कसरी सडकमा आउनु भयो दिदी ?दिदीले भन्दै गईन्नाम कन्चन शर्मा रेग्मीघर टिकाथलीउमेर ४५ वर्षश्रीमान मोहन रेग्मीछोराहरु दिपेन्द्र रेग्मी, सागर रेग्मी३ जना नै इन्जिनियर२०४७ असार ३ गते विहे भएको ।व्याचलर पिके कलेजबाटतीनवर्ष ओम नर्सिङ कलेज चावहिलमा पढेको (२०५३÷०५४ ÷०५५) ओम अस्पतालमा साढे चारवर्ष काम गरेको जनरल वार्डमा नर्सका रुपमा ।भिनाजु डाक्टर भद्र पोखरेलजेठी दिदी निर्मला पोखरेल फोन नं ४७७०४१७)श्रीमानसँग १९ वर्ष विताएको ।छोड्नुका कारण–बांगो र टेढो शरीरअर्को विवाह गरिसकेका छन् ।गीतसाझ प¥यो तर तिमी आएनौरोएरै मेरा रात विते तर तिमी आएनौं ।कन्चनले भन्दै गइन्, मैले टिप्दै गरे ।
कान्छो छोरा पुल्चोकमा पढ्छ । जेठो बेंगलोरमा पढ्दै छ ।दाजुभाइ, अशोक शर्मा, क्यालिफोर्निया, सुवास शर्मा साइला भाइ, वासिङ्टन डिसी,आमा विराटनगर बयरगाँछी । आउ बस त भन्नु हुन्छ । तर, भाइ बुहारी छन घरमा त्यस्तै त होनी, जान्न । (हे.तस्बिर)काम गरेर पनि त बाँच्न सक्नुहुन्थ्यो नी किन यस्तो गर्नु भएको ?काम कसैले दिएनन्, मोडेल अस्पतालमा डा. भरत प्रधानसँग जब चाहिएको छ भने, उहाँले जुम्ला जाउँ भन्नु भयो । तर, म गइन् ।मलाई १ सय दिनुस् म श्रीमानको घर टिकाथलीमा जान्छु ।साच्चै जानुहुन्छ त ? तपाइ जानुहुन्न ।होइन जान्छु । मेरो घरको नम्बर यो हो फोन गर्नुस् है । कन्चनले फोन नं अनि श्रीमानको नाम आफै टिपिदिइन् । (हे.तस्बिर)￼पहिले पसलकी आमैको कुराबाट कन्चन दिदी धेरै भो सडकमा हिड्न थालेको थाहा पाएकी मैले, १ सय हातमा त राखिदिए तर, घरजान दिइन् । दिदी फेरि अगाडि बढीन् । मलाई त्यतिबेला दिक्षाको सम्झना आयो । दिक्षाको संस्थामा म एकपटक पनि पुगेको छैन र नजदिकबाट उनलाई चिनेको भनेको कहिलेकाँही एनआरएनएहरुको सम्मेलनमा बच्चाहरु लिएर सोल्टी होटल र आर्मि क्लवका कार्यक्रममा पुगेका बेला प्रत्यक्ष देख्ने बाहेक, अरु सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा उनले गरेका परोपकारी कामहरुको बारेमा जानकार थिए । र सम्झना थियो दिक्षाको परोपकारी कामको जानकारीका साथै तल पुछारमा मोबाइल नम्बर पनि हुन्छ सधै । त्यो अहिले पनि छ ।म सँग दिक्षाको नम्बर मोबाइलमा सेभ थिएन । तर, अफिसमा फोन गरेर अफिसमै बस्ने फर्शुराम भुर्तेल भाइलाई दिक्षाको नम्बर फेसबुकबाट निकालेर दिन अनुरोध गरे ।उहाँले १० मिनेटमै फोन नम्बर दिनु भयो ।हेलो दिक्षा जी कता हुनुहुन्छ ?म चन्दा थापा, बोल्दैछु ।भन्नुस् न,सुन्नु न एकजना नर्स दिदी बाटोमा हुनुहुन्छ । मेन्टली प्रोबलम भएजस्तो पनि छ । तपाइकोमा लगेर राखेर केही काउन्सीलिङ गरिदिनुहुन्छ की ? दिदीलाई राम्रो बनाउन सकियो भने भोली दिदीले समाजको लागि केही गर्छिन की !हुन्छ, कहाँनेर हो ? म आउँछु एकछिन टाइम लाग्छ ।वास्तवमा मलाई विहानको साढे सात बजे स्कुल जाने भदाको लागि साढे ६ बजे नै दुध लिएर घर पुग्नु पर्दथ्यो । घरमा फोन गरेर अलि ढिलो हुन्छ है भनेर म कन्चन दिदीलाई दिक्षाको साथमा लगाएर पठाउने अठोटले नै साढे ६ बजेदेखि झण्डै पौने नौ बजेसम्म त्यहि बसे ।म र कन्चन दिदी ग्लोवल बैंकको पेटीमा थियौं ।पहिलो आमैको कलम र कापी छोडी सकेको हुनाले फेरि ग्लोवल बैंकका गार्डसँग कलम मागेर टिपे । दिदीले मिठो गीत पनि गाइन् ।एउटा, आनि छोइङको गीत “फूलको आँखामा फूलै संसार” अर्को हरफयो जिन्दगी खै के जिन्दगीहिड्दा हिड्दै चुड्नेचप्पलको फिताजस्तो जिन्दगीदिदीले भावुक कुरा गरिन् ।
अनि कान्छी औला ठड्याउँदै पिसाब लागेको भनेर हिड्न थालिन्, आइ हाल्छु भन्दै । म सँगसँगै गए । दिदीलाई चुरोट खान मन लागेको रहेछ । उनले चुरोट माग्न पसलमा पुगिन् । तर, ती पसलकी दिदीले “ उता जा, आइज त मात्रै ।” मैले बुझी हाले, अनि आफै खुकुरी चुरोट किनिदिए । सल्काउन लाइटर मागे । अनि दिक्षाकोमा जाँदा केटाकेटीलाई दिनु भनेर झण्डै ७०–८० रुपैयाँको चक्लेट पनि किनिदिएर हातमा राखिदिए । दिदीले चुरोट तान्न थालिन् मैले फोटो खिचे (हे. तस्बिर) ￼फेरि दिदीलाई ग्लोवल बैंकको पेटीमा लिएर बसे । अनि दिक्षा आइन ट्याक्सीमा चढेर । लागेको थियो । उनी स्कुटरमा आउँछीन् । दिक्षा नजिक आइन् । हाम्रो हल्का परिचय नविकरण भयो फेरि । उनलाई दिदीको कुरा बताए । अनि दिक्षाले उनलाई ग्लोवल बैंकको पेटीमुनि बस्न लगाएर फोटो खिचिन् । दिक्षा र मैले कन्चन दिदीलाई बिचमा राखेर फोटो पनि खिच्यौं ।￼(हे. तस्बिर)अनि, अब मसँग गएर बस्ने भनेर लिएर गइन् दिक्षाले। दिक्षाले ट्याक्सी चढ्ने बेलामा भनेकी थिइन् “ मसँग त ट्याक्सीमा जाने पैसा पनि छैन् ।” मैले म सँग छ भनेर २५० जति थियो होला सायद दिए । धापासीमा रहेको दिक्षाको संस्थामा पुग्न त्यतिले पुग्ने थिएन सायद । मैले “तपाइको पनि सोसियल कन्ट्रीव्युसन होस् है भाइ” भनेपछि ट्याक्सी ड्राइभर भाइले टाउको हलाउँदै हुन्छ भने । सायद बाटोमा उद्धार गर्न लागिएकी कन्चन दिदीको अनुहार देखेर आफ्नो सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने निर्णय लिए उनले पनि । अनि मैले दिदीलाई नजदिक आउँदै गरेको तिजमा रातो सारी लिएर आउने बाचा गरेर ट्याक्सीमा चढाइदिए ।ट्याक्सी सानो गौचरण हुँदै धापासी तिर लाग्यो । म कन्चन दिदीको सुखद जीवनको कामना गर्दै ब्याटमिन्टनको झोला पिठ्युतिर भिरेर घरतिर लागे ।अफिसमा आएर दैनिकी सुरु भयो । त्यतिबेला खासै मिति नलेखे पनि । आउने दिनै फेसबुकमा कन्चन दिदीले भनेको शब्दयो जिन्दगी खै के जिन्दगीहिड्दा हिड्दै चुड्नेचप्पलको फिताजस्तो जिन्दगी-
लेखेर कथा पछि लेख्ुछ भनेर स्टाटस राखेकी थिए । त्यो दिन साउन ८ गते ( २१ जुलाई २०१६) रहेछ ।कन्चन दिदी दिक्षाकोमा पुगेको सायद १५–२० दिन पुगेको थियो की, दिदी त्यहाँबाट हिडिन् भनेर दिक्षाले फोन गरिन् । “दिदी कतै देख्नु भएको थियो की कन्चन दिदीलाई, मैले उनको श्रीमानसँग कुरा गरेकी छु त्यो दिदीलाई कहाँ भेट्ने होला ?” मैले खोइ दिक्षा देखिन् नी भनेकी थिए । पछि दिक्षाले “कन्चन दिदीले बहिनी म यहाँ छु भनेर फोन गरेपछि लिएर आए भनेर तस्बिर फेसबुकमा राखेकी थिईन् ।कथा लेख्छु भन्दा थिए, तर, समाजसेवी दिक्षाको संस्थामा पुगेकी दिदीको दैनिकी हेर्दै जानकारी लिए । कथा लेख्न त्यति आवस्यक पनि ठानिन् । दिदी सुरक्षित तरिकाले बसेको दिक्षाले अपडेट गरेको फोटोबाट थाहा हुन्थ्यो ।तर, एक्कासी दिदीलाई कान्तिपुरमा सुमनसँग देख्दा पो झसंग भए । दिदी त कान्तिपुरमा इन्टरभ्यु दिने भइसक्नु भएछ भनेर ।इन्टरभ्यु सबै हेरे । सुने । राम्रै लाग्यो दिदीको कुरा । तर, एउटा कुरामा चित्त बुझेन् “ दिदीले म बसेको अगाडिबाट प्रधानमन्त्रीको गाडी हिड्यो, थुप्रै समाजसेवी हिडे, तर कसैले देखेन् । दिक्षाले फोहोरको थुप्रोबाट आमा भन्दै उठाएर पवित्र समाजमा ल्याइन् ।”हो, दिक्षाले फोहोरको थुप्रोबाट कलेजमा पढाउने प्रोफेसर लगायतका धेरै पीडितको उद्धार गरेर धेरैको सेवा गरेको कुरो बाहिर आएको थियो । झण्डै १० वर्ष देखि मैले पनि दिक्षाका गतिबिधि हेर्दै थिए । कहिले काँही सोच्न बाध्य हुन्थे । दिक्षालाई लाज घिन केही लाग्दैन् । मानब भएर जन्मिएको यो धर्तिमा मानवियता बुझेकी छन् उनले अनि निरन्तर सेवामा लागिरहेकी छन् ।यसको वास्तविकता दिक्षालाई नै थाहा होला उनको पवित्र सेवाको पुष्ट्याइ गर्ने जिम्मा उनकै हो । मलाई दिक्षाका बारेमा केही भन्नु छैन् । मैले दिक्षालाई यो भन्दा बढी केही पनि चिन्दीन् । तर, मैले सबैलाई भन्नै पर्छ कन्चन दिदी दिक्षाकोमा जानुभन्दा पहिले फोहोरको डंगुरमा नभएर सफा सडकको पेटीमा थिइन् । त्यहिबाट उद्धार गरिएको हो ।अहिले दिक्षाका शुभचिन्तकहरुले दिक्षाले कन्चनलाई यो रुपमा पुलमुनिबाट उद्धार गरेको र पानी खुवाइदिएको भनेर अर्कै फोटो राखेर प्रचार गरिएको छ । मलाई लाग्छ कन्चन दिदी घर छोडेदेखि कहिल्यै पनि त्यस्तो रुपमा देखा परिनन् होला नत उनी पशुपतिको चिता नै तापिन् । यदि चिता तापेकी थिइन् भने मैले जसरी कन्चन दिदीलाई देखे त्यस्तै अरुले पनि चिता तापेको देखेका होलान् । ती कुराहरु विस्तारै आउँनेछन् ।एउटा राम्रो कुरा कन्चन दिदीमा अहिले देखिएको परिवर्तन शरीर सफा र राम्रा कपडा देखे । कुरा पनि त्यहि छन्, जुन मलाई पनि भनेकी थिइन् । तर, त्यो मनमा कसरी ( फोहोरको डंगुर)बाट उठाएको बनावटी झुट कुरा आए भनेर म आफै अन्योलमा छु । “दिदी कसले सिकायो यस्तो झुटो बोल्न, वा फेरि फोहोरमा लगेर फोटो खिचियो कसैबाट ? ”समाजसेवी दिक्षाहरुका प्रयत्न र अभ्यास कति पवित्र र निष्ठावान होलान वा कति प्रचारमुखी होलान् ती आफ्नै ठाउँमा छ । राज्यले सडकमा पुगेका बेशाहारा, अशक्त, मानसिक असन्तुलन भएकाहरु, बालक, बयस्क र वृद्धबृद्धाहरुको उचित संरक्षण र जिम्मेवारी नलिएसम्म यस्तै घटनाहरु आइरहन्छन्, कन्चनका कथाहरु दोहोरिरहन्छन् ।- चन्दा थापा जिबन को गोरेटो
5 अचम्म का वेबसाइट हरु जो तपाई हरु ले आज सम्म देख्नु भएको छैन होला
विहान उठ्ने वित्तिकै यी ५ चिज देखियो भने दिन शुभ :: जानकारीका लागि पूरा पढ्नुहोला! -
२९ बर्षिय छोरो गुमाएकी यमबुद्धकी आमाको कारुणिक भिडियो/ जसले रुवायो सारा नेपालीलाई (भिडियो)
मञ्जनबाट थाहा पाउन सकिन्छ गर्भवती भए नभएको
जान्नु होस् तपाई को राशी अनुसार कुन सेक्स पोजिसन बेस्ट छ 45
हामी सहमतिमा यौनसम्पर्क गर्ने गर्छौं तर समय नमिल्दा म हस्तमैथुन ... 44
कस्तो पेटको आकारको महिलाको भाग्य कस्तो यसरी थाहा पाउनुहोस्
होसियार हुनुहोस सेक्स गर्दा कहिल्यै नगर्नुस् यी ३ गल्तीहरु ; जसले ज्यान जान सक्छ
यी हुन् यम बुद्धकी श्रीमती, यसकारण राखेका थिए अनिलले आफ्नो नाम,‘यम बुद्ध’